Fursadaha iskaa wax u qabso ee cusub oo laga helo Jikada Fursadaha - Cunnooyinka Lugaha
Fursadaha tabaruca ee cusub ee Jikada Fursadaha
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno hab cusub oo aan ugu tabaruci karno Cuntada Lugaha: Waxaan raadineynaa mutadawiciin gacan ka geysta diyaarinta cunnooyinka la keeno Cunnada Jikada Fursadaha.
Jikada Fursadaha ayaa ah jikada ugu horeysa ee loogu talagalay u adeegida Cunnada qaatayaasha Wheels ee Magaalooyinka Mataanaha ah. Markay jikada sii ballaadhayso, Waxaan raadineynaa mutadawiciin gacan ka geysta xirmooyinka cuntada ee la geyn doono goobaha bixinta xaafadaha.
Mutadawiciinta jikada ayaa ka caawiya baakadaynta cuntada saxanka geynta iyo hawlo kale sida duubista ama baakadaha alaabada sida duub ama muufka. Haddii aad rabto inaad tabaruc ku sameyso jawi madadaalo iyo iskaashi leh oo aad indha indheyn ugu hesho sida cuntooyinka loogu sameeyo Jikada Fursadaha, tani waa fursad aad u wanaagsan adiga!
Haddii wadista baabuurtu adiga kuu ahayn, tani sidoo kale waa dariiqa ugu fiican ee aad door uga qaadan karto keenista cunnooyinka nafaqada leh dadka ku hela Cunnooyinka Cagafyada. Jikada Fursadaha waxay ku taal 3025 4th Ave. S., Minneapolis, oo ku taal ama u dhow khadadka basaska 11, 21 iyo 27.
Tabaruceyaashu waxay isdiiwaangalin karaan wareeg ah oo dhererkiisu yahay 1.5 ilaa 2 saacadood oo wareegyadana la heli karo 8 subaxnimo ilaa 4 galabnimo Isniinta-Jimcaha Kooxo ilaa afar qof ah ayaa la waafajin karaa isbeddel kasta.
Haddii aad jeceshahay inaad ku tabarucdo Jikada Fursadaha, fadlan buuxi foomkan. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid wac 612-623-3363.
Diisambar 6, 2017